Kutheni la mboni? Oovimba-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Udidi Archives: Kutheni le nto imboni?
Ukubonakala kukaYesu, uMama wethu, kunye noSt.Joseph kuEdson Glauber, oneminyaka engamashumi amabini anesibini, kunye nomama wakhe, uMaria do Carmo, baqala ngo-1994. Ngo-2021, uEdson wasweleka ngenxa yesigulo esifutshane. Ukubonakaliswa kwaziwa ngokuba yi-Itapiranga, ebizwa ngokuba yidolophu yabo yase-Amazon yaseBrazil. Intombi Enyulu uMariya yazazisa […]
Indoda yaseMntla Melika, enqwenela ukungazichazi igama, esiza kuthi nguWalter, wayekhe wangxola, waqhayisa, wahlekisa ngenkolo yamaKatolika, wade wayikrazula iirosari zikanina ezandleni zakhe zokuthandaza, wabachithachitha ngaphaya komgangatho. Emva koko wahamba ngenguquko enzulu. Ngenye imini, umhlobo wakhe […]
Ngokumalunga noMbingeleli, i-Exorcist, uMseki kunye ne-Superior General ye-Apostolic Fraternity ye-Saint Benedict Joseph Labre (eyasekwa ngo-2012) Nge-23 ka-Epreli ka-2020, uFr. UMichel Rodrigue usixelele ukuba ubishophu wakhe, uMfu Gilles Lemay, akaxhasi uFr. Imiyalezo kaMichel; Utshilo uFr. UMichel, ngokubhala, akahambisani nembono “ye […]
U-Eduardo Ferreira owazalwa ngo-1972 e-Itajai kwiphondo laseSanta Catarina eBrazil, wafumana umfanekiso weNkosikazi yethu yase-Aparecida kwintendelezo yendlu yosapho ngoJanuwari 6, 1983. Ngo-Okthobha 12, 1987, kwiintsuku ezine emva komthendeleko wakhe wokuqala, U-Eduardo kunye nodadewabo uEliete babethandaza phambi kwale […]
Ngo-1992, uMarco Ferrari waqala ukudibana nabahlobo ukuba bathandaze iRosari ngoMgqibelo ngokuhlwa. Ngo-Matshi 26, 1994 weva ilizwi lisithi "Nyana omncinci, bhala!" "Marco, nyana othandekayo, ungoyiki, ndinguMama [wakho], bhalela bonke abantakwenu noodadewenu". Imbonakalo yokuqala ka "Mama Wothando" njengo […]
Imfihlakalo yasePoland u-Alicja Lenczewska wazalelwa eWarsaw ngo-1934 kwaye wasweleka ngo-2012, ubomi bakhe bobuchwephesha buchithwa ikakhulu njengomfundisi-ntsapho kunye nomlawuli onxulumene nesikolo kwisixeko esikumantla ntshona eSzczecin. Ekunye nomntakwabo, waqala ukuthatha inxaxheba kwiintlanganiso zoHlaziyo lweCharismatic Renewal ngo-1984 elandela […]
I-Italiya (1930-2011) uMfundisi, uMystic, kunye noMsunguli we-Marian Movement of Prristi Oku kulandelayo kulungisiwe, ngokuyinxenye, kwincwadi, ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofeto zokuKhanya kwesazela, iphe. 252-253: Utata uStefano UGobbi wazalelwa eDongo, e-Itali, emantla eMilan ngo-1930 kwaye wasweleka ngo-2011. Njengomntu nje ongaphangeliyo, wayephethe i-inshurensi […]
(1913-1985) Umfazi, uMama, uMystic, kunye noMsunguli weLangatye lothando uMbutho u-Elizabeth Szántò wayeyimfihlakalo yaseHungary eyazalelwa eBudapest ngo-1913, owayephila ubomi bobuhlwempu nobunzima. Wayengoyena mntwana mdala kwaye inguye kuphela owayekunye namawele akhe abantakwabo abathandathu ukuba aphile ebudaleni. Ngeminyaka emihlanu, utata wakhe wasweleka, […]
UJennifer ngumama oselula waseMelika nomama wasekhaya (igama lakhe lokugqibela ligodliwe kwisicelo somlawuli wakhe wokomoya ukuze ahloniphe ubumfihlo bendoda yakhe kunye nosapho.) Wayeyiloo nto, mhlawumbi, into eyayinokuthiwa ngumKatolika "oqhelekileyo" ohamba ngeCawa. owayesazi okuncinci malunga nokholo lwakhe kwaye nangaphantsi ngeBhayibhile. Waye wacinga kwelinye […]
Izibhengezo eTrevignano Romano, e-Itali Izityholo zaseMarian eziseTrevignano Romano e-Italiya ukuya eGisella Cardia zintsha. Baqala ngo-2016 kulandela ukutyelela kwakhe eMedjugorje, eBosnia-Herzegovina, kunye nokuthengwa komfanekiso oqingqiweyo weNkosazana yethu, eyaqala ukulila igazi. Imbonakalo sele ibingumbandela welizwe lase-Italiya […]